မဖြစ်နိုင်သောနိုင်ငံတော် မြောက်ကိုရီးယား – Pann Satt Lann Books
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းမှာ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲ
တကယ့်လက်တွေ့က ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်အောင်ပွဲဆိုတာဟာ ကြီးလေးကြီး နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အောင်ပွဲပါ။ ဒီနိုင်ငံကြီးတွေက ကမ္ဘာကြီးကို အမွေခွဲကြပြီး ကမ္ဘာ့ကိုလိုနီစနစ်တစ်ရပ်ကို အတူတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို အမွေခွဲ လွှမ်းမိုးဖို့လုပ်ကြရင်း ပွတ်တိုက်မှုတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ဖြစ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခကို စစ်အေးတိုက်ပွဲလို့ အမည်တပ်ကြပါတယ်။
ဒီစစ်အေးတိုက်ပွဲကနေပဲ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေအပြိုင်းအရိုင်းပေါ်လာခဲ့ပြီး ဒီနိုင်ငံတွေကို အရင်းပြုပြီး လက်ဝဲ လက်ယာ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ နယ်ချဲ့ပုံသဏ္ဍန်သစ်နဲ့ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်းသစ်ကို ဖန်တီးရင်း ဆက်ပြီး အမွေလုကြတာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဒီနယ်ချဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် ဒီကနေ့အထိ နိုင်ငံငယ်တွေအပေါ် အသုံးချနေတုန်းပါပဲ။
နယ်ချဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကြောင့် စစ်အာဏာသိမ်း အစိုးရတွေ အပြိုင်ဖြစ်ခဲ့သလို ကွန်မြူနစ်အမည်ခံ အာဏာရှင်စစ်စစ်နိုင်ငံတွေ ရှင်သန်လာခဲ့တယ်။ ဒီနိုင်ငံကြီးတွေ ဖော်ထားတဲ့ ကစားကွက်အောက်မှာ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတွေ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတွေဟာ ချက်စ်ဘုတ်ပေါ်က ပွန်းတွေလို ဖြစ်လာရပါတယ်။ နိုင်ငံတွေပြိုကွဲခဲ့ရတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်တွေ လောင်ကျွမ်းခဲ့ရတယ်။
မြောက်ကိုရီယားဟာ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်လီဆွန်ကအစ ချစ်လှစွာသော ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအီအလယ် ဒီကနေ့ မြေတော်လေး ကင်ဂျုံအန်အထိ ဘယ်တုန်းကမှ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကွန်မြူနစ်နာမည်ခံ ဂျပ်ချ်သဘောတရားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အာဏာရှင်စစ်စစ် နိုင်ငံတစ်ခုပါ။
တနည်းအားဖြင့် ကွန်ဖြူရှပ်အယူ အဆနဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ဂျပ်ချ်အယူအဆကို အခိုင်အမာထူထောင်ထားတဲ့ ပဒေသရာဇ် အာဏာရှင်စစ်စစ် နိုင်ငံတစ်ခုပါ။
တစ်ဖက်မှာ တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံဟာ အလျံလျံညီညီစီးပွားရေးအင်အားနဲ့ တောက်ပြောင်နေချိန်မှာ မြောက်ကိုရီးယားလူထုဟာ ရက်စက်မှုအပေါင်းခါးစည်းခံရင်း လူလို့တောင်ပြောမရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒီကနေ့အထိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေဆဲပါ။ ဒါကိုက မဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ ပြောနေရတာပါ။ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ… . ။ ဘာလို့ ဒီကနေ့ထိ နိင်ငံနစ်ခုဟာ နှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီး ပြိုကွဲနေရတာလဲ…. ။
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဒါကို ရှာဖွေတွေ့နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအခြေခံတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ နယ်ချဲ့သဏ္ဍန်သစ်နဲ့ ကွန်မြူနစ်အမည်ခံ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွာအတွက် အသုံးချကြတာတွေဟာ သမိုင်းအရှိတရားတွေဆိုတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ခါးစီးခံနေရတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံက ပြည်သူလူထုတွေပါပဲ။
7.3 x 1 x 10.3inches
ယဉ်မျိုးစာပေ၊ 2021 ဇန်နဝါရီလ (ပ-ကြိမ်)
“မဖြစ်နိုင်သောနိုင်ငံတော် မြောက်ကိုရီးယား” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply
အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်း၌ လူတိုင်းနှင့်စကားပြောနည်း
သမ္မတကြီးဦးဘဦး၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိ (ကျွန်တော်၏ဗမာပြည်)